“Tour Builder”, tolotra hafa an’ny Google tsy azo ampiasaina any Kiobà · Global Voices teny Malagasy
Nandika (en) i Ángel Carrión
Voadika ny 22 Desambra 2013 10:49 GMT
Vakio amin'ny teny English, Nederlands, Ελληνικά, বাংলা, 日本語, Español
Saripika mitranga rehefa mampiasa Tour Builder any Kiobà.
Tour Builder, tolotra iray vaovao avy amin'ny Google, mbola andalam-pivoarana no tsy azon'ireo mpampiasa kiobana ampiasaina noho ny fandraràna ara-toekarena napetrak'i Etazonia ho an'i Kiobà. Ankehitriny Google Earth, tolotr'i Google iray hafa tsy azo ampiasaina any Kiobà, dia ahafahan'ireo mpampiasa azy mitsidika ara-virtoaly ireo toerana izay tiany eto an-tany. “Afaka nanova ny fomba fitantaran'ireo mpampiasa ny fivezivezena nataony teo amin'ny fiainany” ny Tour Builder, araka ny lahatsoratra iray nivoaka tao amin'ny Mashable.
Niteraka adihevitra mahaliana io fitaovana io, izay tsy ela dia niparitaka teo anivon'ireo mpampiasa kiobanina, izay nihevitra fa ho afaka hitantara ny niainany amin'ny alalana sary, lahatsary, lahatsoratra, ary Google Earth. Taloha, nosakanan'i Google ny fidirana tamin'ny Google Earth, Google destktop Search, Google Toolbar, Google Analytics ary Google Code Search.
Lahatsoratra iray tao amin'ny Cubadebate [es] tamin'ny taona 2012 no manamafy fa ny tsifahatomombanana izay manakana ny fampiasana ny Google Analytics any Kiobà “dia mifototra amin'ireo fitsipika efa voafaritra mialoha niaraka tamin'ny nosy.” Noho izany, nanamafy tamin'ireo mpampiasa Kiobàna ny Google fa “tsy mahazo mampiasa ny tolotra fandrindràna ny jery amin'ny aterineto izy ireo satria mandika ireo fandradàna napetraky ny Etazonia.”
Tsy mbola afaka nanazava i Google hoe nahoana no anisany amin'ireo tolotra voasakana any Kiobà koa ny Google Analytics, vokatra malalaka iray – toy ny fitaovam-pikarohana sy fijerena mailaka -, izay mifototra amin'ny web ary tsy mila sintonin'ny mpampiasa, izay, raha araka ny fanazavana, dia midika ho tsy fisian'ny fifanakalozana ara-toekarena na fanondranana ireo vokatra, hoy ny Cubadebate nanampy.
Ny volana Novambra amin'ity taona ity ihany, nanambara tamin'ny fanadihadiana iray tao amin'ny Wall Street Journal ny Filoha Mpanatanteraka ny Google, Eric Schmidt, fa anisan'ny loha laharana amin'ireo zotra iraisam-pirenena indrindra ao amin'ny fandaharam-potoanany, i Kiobà. Ankehitriny i Google tsy mamela hiditra afatsy ny fikarohana, ny firesahana, ny mailaka, ary ireo tolotra ara-tserasera hafa izay tsy voararan'ny andininy 515.578 amin'ny fepetram-pandraràn'i Etazonia any Kiobà.